Kwigadi yeziqhamo, iholide yosapho-Casa Mix - I-Airbnb
Kwigadi yeziqhamo, iholide yosapho-Casa Mix
UVictor ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uVictor iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Lo mhlaba umi kumantla e-Arges County, ephawulwa ziinduli ezithambileyo kunye nezityalo ezininzi. Ummelwane / indawo ithule kakhulu, ekupheleni kwesitrato esinezindlu ezintle kunye nabantu abakhethekileyo. Izindlu zibekwe kwindawo ebiyelweyo ye-3500 sqm kunye nemithi yeziqhamo emincinci engama-200, ingca kunye nendawo eninzi yokudlala yabantwana abancinci.
Siyazithanda izilwanyana kwaye sizamkela ngovuyo izilwanyana ezikwiyadi yendawo.
I-House MIX yinxalenye yepropathi equkethe izindlu zeeholide ezi-2.
Indlu ye-MIX inemilinganiselo ye-27 sqm kwaye iqulethe ikhitshi, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala, igumbi lokulala ngaphezu kwendawo yokuhlambela.
Indlu ye-ANDI inobungakanani be-54 sqm kwaye ibandakanya igumbi labazali elinebhedi ephindwe kabini, igumbi labantwana elineebhedi ze-bunk, igumbi lokuhlala elivulekileyo elinekhitshi, igumbi lokuhlambela kunye ne-terrace encinci.
Izindlu nganye zixhotyiswe ngentambo yeTV kunye ne-intanethi evela kwi-DIGI, i-TV, ifriji, ibhoyila, i-induction hob, umenzi wekofu kunye nezinye izixhobo eziluncedo. I-terrace ixhotyiswe ngefenitshala ye-barbecue kunye ne-terrace.
Indawo yaseLunca isentsha kwaye ixatyisiwe ngokudibanisa ubomi belizwe kunye nokuba kufutshane kwayo esixekweni. Abantu basebenza nzima, banengqiqo, banembeko kwaye bakulungele ukuboleka isandla.